Ulwazi ngemveliso yeFibre optic PLC (isicwangciso sesibane samaza ombane) yokuchaka okubizwa ngokuba yi-blockless fiber PLC splitter, luhlobo lwesixhobo solawulo lwamandla esenziwe sisebenzisa itekhnoloji ye-silica optical waveguide ukusasaza imiqondiso ebonakalayo evela kwi-Central Office (CO) kwiindawo ezininzi. Ifayibha optic yokuchaka luhlobo lweemveliso ze-ODN ezifanelekileyo iinethiwekhi ze-PON ezinokufakwa kwikhasethi ye-pigtail, isixhobo sovavanyo kunye nenkqubo yeWDM, enciphisa indawo yokuhlala. ...
Ifayibha optic PLC (isicwangciso sesibane samaza ombane) yokuchaka okunye okubizwa ngokuba yi-blockless fiber PLC splitter, luhlobo lwesixhobo solawulo lwamandla ebonakalayo esenziwe kusetyenziswa itekhnoloji ye-silica optical waveguide ukusasaza imiqondiso ebonakalayo evela kwi-Central Office (CO) kwiindawo ezininzi.
Ifayibha optic yokuchaka luhlobo lweemveliso ze-ODN ezifanelekileyo iinethiwekhi ze-PON ezinokufakwa kwikhasethi yehagu, isixhobo sovavanyo kunye nenkqubo yeWDM, enciphisa indawo yokuhlala.
Ukulahleka kokufakwa okuphantsi (IL)
Ukuphulukana nelahleko ephantsi (PDL)
Ulungelelwaniso lwendibaniselwano luvumela ukusetyenziswa ngeebhokisi ezahlukeneyo zokupheliswa
Easy kunye nexabiso eliphantsi ufakelo FTTH
Ukuzinza okugqwesileyo kwendalo
Ukusebenza kwamaza (nm)
Ubunzima be-fiber Optical, mm mmmm
Uhlobo ifayibha wokubonisa
Ukulahleka kokufaka (dB)
Ukuphulukana nokuxhomekeka kwelahleko (dB)
Ilahleko yokuxhomekeka kweliza lamaza (dB)
Buyisela ilahleko (dB)
Iqondo lobushushu elisebenzayo ℃
-20 ukuya kuma-85
Ubushushu bokugcina ℃
-40 ukuya kuma-85
Ubude ifayibha Optical (m)
Indoor nangaphandle ucango ufakelo FTTH
Iinkqubo zokubona ifayibha ezibonakalayo
Inkqubo ye- I-PLC yokuqhekeka engenanto inokuvumela ujongano olunye lwenethiwekhi ye-GPON ukuba yabelwane phakathi kwababhalisi abaninzi kwaye ivumele ababoneleli beenkonzo ukuba bavumele usetyenziso olunamandla lomda wendlela. Uqhekeko olungena-block lubonisa ubungakanani obuncinci, lukhetho oluphakathi phakathi kwevolthi miniaturization kunye nokukhuselwa kwefayibha. Kukulungele ukufakela kuyilo lwakho lwenkqubo kunye nokuvelisa I-PLC splitter esiyinikezelayo yile: 1 × 2, 1 × 4, 1 × 8, 1 × 16, 1 × 32,1 × 64.
Iphakheji yale splC yokuqhekeka ilula ibhokisi yebhokisi. Indlela yokupakisha ipallet iyafumaneka nayo, jonga iinkcukacha ngakumbi ngentengiso yethu.
Umgca weJera usebenza ngokwe-ISO 9001: 2015, oku kuyasivumela ukuba sithengise kumazwe angaphezu kwama-40 kunye nemimandla enje ngeCIS, iYurophu, uMzantsi Melika, uMbindi Mpuma, iAfrika neAsia.
Sibonelela ngezinto zokuhambisa zefayibha ezibonakalayo ze-FTTH kunye nokubonelela ngekhithi yonke yezincedisi kubathengi bethu, ezinje intambo ye-fiber optic, ii-clamp ze-cable, i-cable bracket, iibhokisi zokuphelisa i-fiber optic, i-adapters, intambo yepatch njalonjalo.
Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi malunga Fibre optic PLC yokuchaka ixabiso.
Egqithileyo Umatshini wokuqhekeza weKhasi ye-Mini PLC
I-PLC yokuqhekeka engenanto
Ifayibha Umthambo Cable Splitter Factory
Ifayibha Umthambo Cable Splitter Abavelisi
Fibre optic PLC yokuchaka ixabiso
ikhasethi encinci ye-PLC yokuchaka
Ibhokisi yokuhambisa i-fiber optic, i-Fodb-8
Ibhokisi yokuphelisa i-Ftth FODB-8A